I-China i-Liner ezimbini zokuTywilwa kobushushu bokuTywina iTywina nge "Ulwakhiwo" mveliso kunye nabathengisi | 品牌 名 / 公司 名
Iziqwenga ezibini zokuTywina iTywina yoLwakhiwo ngeSakhiwo
Izinto zokwenza imveliso: Izinto ezixhaswayo
Izinto ezixhasayo: Ibhodi ye-Pulp okanye i-Polyethylene eyandisiweyo (i-EPE)
Ukubeka uphawu: I-PS, i-PP, i-PET, i-EVOH okanye i-PE
Ubukhulu obuqhelekileyo: 0.2-1.7mm
Ububanzi obuqhelekileyo: 9-182mm
Samkela logo esingabizi, ubungakanani, ukupakishwa kunye graphic.
Iimveliso zethu zinokufa zisikwe kwiimilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu kwisicelo.
Ubushushu bokutywina ubushushu: 180 ℃ -250 ℃, kuxhomekeke kwizinto zekomityi kunye nokusingqongileyo.
Iphakheji: Iingxowa zeplastiki-iibhokisi zephepha-pallet
MOQ: iziqwenga ezili-10,000
Ixesha lokuzisa: ukuhanjiswa okukhawulezayo, ngaphakathi kweentsuku ezili-15 ukuya ku-30 ​​ezixhomekeke kubungakanani be-odolo kunye nolungiselelo lwemveliso.
Intlawulo: T / T ngeTelegraphic yokuGqithisela okanye i-L / C Ileta yetyala
Ifoyile yeAluminiyam ngumaleko wokuqala wefoyile yealuminium epheleleyo.
Umaleko wealuminium utywinwe kwisitya somlomo.
Uluhlu lwesibini (ikhadibhodi yefom) ishiyeke kwikepusi.
Ukulungele i-PET yokujija, i-PP, i-PS, i-PE, iibhotile zeplastikhi
Ukutywina okuhle kobushushu.
Uluhlu olubanzi lobushushu lokutywina ubushushu.
Umgangatho ophezulu, ukuvuza okungafunekiyo, ukungasebenzi, ukucoca okuphezulu, ukutywina okulula kunye nokuqinileyo.
Umqobo womoya kunye nokufuma.
Ixesha elide lokuqinisekisa.
2. Amatywina ngokutsha
3. Thintela ukuvuza okubiza imali eninzi
4. Ukunciphisa umngcipheko wokuphazanyiswa, iipilferage kunye nongcoliseko
5. Yandisa ixesha lokuhlala
6. Yenza amatywina e-hermetic
7. Ubume bendalo
Izinto ezichaphazela ukutywina
Ububanzi boqhakamshelwano bomhlaba wokutywina: ubungakanani obukhulu bokunxibelelana phakathi kokutywina umphezulu kunye ne-gasket okanye ukupakisha, inde indlela yokuvuza kwamanzi kunye nelahleko enkulu yokulahleka kokuhamba, okuluncedo ekutywinweni. Nangona kunjalo, phantsi kwempembelelo efanayo yokucinezelwa, ubungakanani bobubanzi bokunxibelelana, kuncinci uxinzelelo oluthile. Ke ngoko, ububanzi boqhakamshelwano obufanelekileyo kufuneka bufumaneke ngokwezixhobo zetywina.
Iimpawu zolwelo: i-viscosity yolwelo inegalelo elikhulu ekusebenzeni kokutywina kokupakisha kunye ne-gasket. I-fluid ene-viscosity ephezulu kulula ukuyitywina ngenxa yokungabikho kakuhle. I-viscosity yolwelo iphezulu kakhulu kunerhasi, ke kulula ukuba ulwelo lutywinwe kunerhasi. Umphunga ogcwalisiweyo kulula ukutywina kunomphunga oshushu kakhulu kuba uya kudibanisa kwaye unciphise amathontsi kwaye uthintele ijelo lokuvuza phakathi kokutywina umphezulu. Ukuba mkhulu umthamo weemolekyuli kulwelo, kokukhona kuya kuba lula ukuvalwa ngumsantsa wokutywina, kwaye kulula ukutywina. Ukumanzi kolwelo kwinto yokutywina kukwanefuthe ekutywinweni. Umbane ekulula ukuntywila kulula ukuvuza ngenxa yesenzo se-capillary ye-micro pores kwi-gasket kunye nokupakisha.
Egqithileyo Inxalenye enye yoKwenziwa kobushushu boTywina ngeLine yePhepha leFilimu
Okulandelayo: Iziqwenga ezibini zoKwenziwa kobushushu boTywina ngePhepha lePhepha
Phakamisa 'N' Peel
Inye-isiqwenga Ubushushu Induction Seal Liner nge White ...
Inye-isiqwenga Ubushushu Induction Seal Liner kunye Ngaphakathi ...
-Iziqwenga ezibini zoKwenziwa kobushushu boKhuseleko lweTywina ngephepha ...